A Chinese Odyssey Part 1 &2[Pandora Box & Cindrella] (1995)
Sky High (2005) ဒီသိပ္ပံအက်ရှင်ဇာတ်ကားလေးဟာ Imdb Rating 6.2 ထိတောင်ရရှိထားတဲ့ မိသားစုနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။ Fobidden Kingdom ဇာတ်ကားထဲမှ လူငယ်မင်းသား Michael Angarano နဲ့ အခုလက်ရှိထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ Flash Series ထဲမှ သိပ္ပံပညာရှင်မလေး စနိုး အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Danielle Panabaker တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတာပါ။ ဇာတ်ကားအညွှန်းကိုပြောရရင်ဖြင့် Will Stronghold ဆိုတဲ့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လေးဟာ နာမည်ကြီး Superheroes မောင်နှံနှစ်ဖော်ဖြစ်တဲ့ Steve နဲ့ Josie တို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်ပါတယ်။အဖေရောအမေရော လူစွမ်းကောင်းစွမ်းအားရှင်တွေဖြစ်ပါလျက်နဲ့ Will တစ်ယောက် Super heroes တွေတက်ရမဲ့ကျောင်းကိုတက်ခွင့်ရတဲ့ အချိန်ထိသူ့မှာ အားသာချက်စွမ်းအင် ဘာတစ်ခုမှပေါ်မလာသေးတဲ့အတွက် ကျောင်းရောက်တဲ့အခါလူရွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ Sidekick(အပယ်ခံ) အဖြစ်နဲ့သာ တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သူဘယ်လိုမျိုးအစွမ်းတွေရသွားမလဲ အစွမ်းရပြီးတဲ့နောက်ရော ကျောင်းမှာအဆင်ပြေပါ့မလား။ ဘယ်လို ဒုစာရိုက်ကောင်မျိုးကသူတို့ကျောင်းကြီးအပြင်ကမ္ဘာကြီးကိုပါသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားမလဲဆိုတာတွေကိုတော့spoilerဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ မပြောတော့ပါဘူး။ဇာတ်ကားလေးကိုသာ ဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ File Size : 710 MB Quality : ...
Who Am I? (1998) Who Am I? (1998) IMDb - 6.8/10_____Rotten - 63% Unicodeဂကျြကီခနျြးဇာတျကားတှရေဲ့ အနှဈသာရကိုခံစားရမယျ့ဇာတျကားပါ။ ဒီဇာတျကားကို ငယျငယျတုနျးက ကွညျ့ခဲ့ရတာကို ပွနျသတိရမိပါတယျ။ အခုပွနျကွညျ့တော့လဲ ဆှဲဆောငျမှုရှိပွီး ရသစုံ ပေးစှမျးနိုငျပါသေးတယျ။ IMDb Rating(6.8/10) ထိရရှိထားလို့ ပွနျလညျခံစားပေးကွဖို့ဖိတျချေါအပျပါတယျ။ မွနျမာစာတနျးထိုးကိုတော့ ကို Myo Min Aung မှကိုယျတိုငျဘာသာပွနျထားတာဖွဈပါတယျ။ ------------------------------------------------- Zawgyiဂျက်ကီချန်းဇာတ်ကားတွေရဲ့ အနှစ်သာရကိုခံစားရမယ့်ဇာတ်ကားပါ။ ဒီဇာတ်ကားကို ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့ရတာကို ပြန်သတိရမိပါတယ်။ အခုပြန်ကြည့်တော့လဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ရသစုံ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသေးတယ်။ IMDb Rating(6.8/10) ထိရရှိထားလို့ ပြန်လည်ခံစားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ မြန်မာစာတန်းထိုးကိုတော့ ကို Myo Min Aung မှကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ File size...(1 GB) Quality...HDTV-Rip 720p Format...mp4 Duration....01:48:00 Subtitle....Myanmar Subtitle (Hardsub)
The Mask of Zorro (1998) The Mask of Zorro (1998) IMDb - 6.7/10_____Rotten - 82% ဇာတျလမျးအကွောငျးလေး နညျးနညျးရှငျးပွမှ ဇာတျရညျလညျနိုငျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ နညျးနညျးရှငျးပွပါရစေ။ဇာတျလမျးစတဲ့ ၁၈၂၁ ခုနှဈမှာ အခုအမရေိကနျနိုငျငံ ကာလီဖိုးနီးယားပွညျနယျဟာ စပိနျလကျအောကျခံပွညျနယျလေးတဈခုဖွဈပါတယျ။ အဲဒီဒသေတှကေို မက်ကဆီကိုနဲ့စပိနျတို့က တလှညျ့စီအုပျစိုးနကွေတာဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးအဖှငျ့မှာတော့ ကာလီဖိုးနီးယားကို စပိနျတှလေကျထဲက မက်ကဆီကိုဗိုလျခြုပျကွီး ဆနျတာအနျနာက ပွနျသိမျးတော့မှာကွောငျ့ စပိနျမွို့တျောဝနျ ဒှနျ ရာဖယေဲလျ မှနျတယျရို ထှကျပွေးတော့မယျ့အခနျးနဲ့စပါတယျ။အဲဒီ ဒသေကို စပိနျတှအေုပျစိုးခဲ့စဉျတဈလြှောကျ ပွညျသူတှကေိုနိုငျထကျစီးနငျးလုပျခဲ့တာကွောငျ့ ဇောရိုးဆိုတဲ့မကျြနှာဖုံးရှငျလူစှမျးကောငျးက စပိနျအစိုးရကို တျောလှနျပွီး ပွညျသူတှဘေကျက ရပျတညျပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒှနျ ရာဖယေဲလျဟာ ထှကျပွေးခါနီးဆဲဆဲမှာ ဇောရိုးကို သုတျသငျနိုငျဖို့ အစီအစဉျ တဈခုဆှဲခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မငျးသားတို့ ညီအကိုက ကူညီပေးခဲ့လို့ အသကျအန်တရာယျက လှတျမွောကျခဲ့ပါတယျ။ဒှနျ ရာဖယေဲလျဟာ ဇောရိုးဘယျသူလညျးလို့ ရိပျမိသှားလို့ သှာဖမျးတဲ့အခါ ဇောရိုးတဈဖွဈလညျး စပိနျလူကွီးလူကောငျးဖွဈတဲ့ ဒှနျ ...
SPL II: A Time for Consequences (2015) SPL II: A Time for Consequences (2015) IMDb - 6.7/10_____Rotten - 100% ထိုငျးမငျးသား TONY JAA နဲ့ အခွားသောနာမညျကွီးမငျးသားတှပေါဝငျထားတဲ့ IMDB Rating (6.7/10) ရရှိထားတဲ့ ဟောငျကောငျအကျရှငျဇာတျကားပါ။ အကျရှငျပရိသတျတှအေတှကျ အမှနျအကနျအကျရှငျကွညျ့ရမယျ့ ဇာတျကားသဈလေးတဈ ကားဖွဈပါတယျ။ လြှို့ဝှကျ ရဲစုံထောကျ ခနျြခြီကဈ ဟာ မှုခငျးတှကေို ကွိုးကိုငျ ညှနျကွားနေ တဲ့ မစ်စတာဟောငျ ဆိုသူကို ဖမျးဆီးနိုငျဖို့ အတှကျ ဆေးသမား အယောငျဆောငျပွီး စုံစမျးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျတော့ ကဈ ရဲ့အခွအေနမှေနျပျေါသှားပွီး မကျြမွငျ သကျသလေညျး ပြောကျသှားခဲ့ပါတယျ။ လူဆိုး ဂိုဏျးအဖှဲ့ဟာ ကဈကို ပွနျပေးဆှဲ ခဲ့ပွီး ထိုငျးမှာရှိတဲ့ အကဉျြးထောငျကို ပို့ပဈ ခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီ အကဉျြးထောငျမှာ ထိုငျး ရဲအရာရှိ ခကျြတျခြိုငျ ဟာ အစောငျ့ တာဝနျကြ ...
Walking With Dinosanurs (2013) ဒိုင်နိုဆောများ အကြောင်းကို ချစ်စဖွယ် ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ်မျိုးဖြင့် ရိုက်ကူး တင်ပြထားသည့် Walking With Dinosaurs အမည်ရှိ ကာတွန်းရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွင် အဓိကဇာတ်ကောင် ဒိုင်နိုဆောလေး Patchi အတွက် နောက်ခံ အသံဖြင့် သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူ Justin Long ကို Femalefrist Website က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားသည်များထဲမှ ဒိုင်နိုဆောများနှင့် ပတ်သက်သော သူ၏ အမှတ်တရများ၊ Patchi အတွက် အသံဖြင့် သရုပ်ဆောင် ပေးခဲ့ရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့် ကာတွန်းရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများအပေါ် သူ့သဘောထားတို့ကို ကောက်နုတ် တင်ပြထားပါသည်။FF : ဒိုင်နိုဆောတွေ အကြောင်းကို လူတွေ ဘာကြောင့် စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ခင်ဗျားထင်လဲ။JL : သိပ်ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းပါ။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေက ဘယ်နေရာကနေ စတင်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ ...
The Nut Job (2014) ဒီကားလေးဟာ ကိုယ်စိတ်ထင်ရာလုပ်တတ်ပြီး ကိုယ်ဖို့ပဲကြည့်တတ်တဲ့ ရှဥ့်လေးတစ်ကောင်အကြောင်းကို အခြေခံထားပာတယ်... အဲ့ဒီရှဥ့်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ ဆာလီ လို့ခော်ပာတယ်...သူ့ရဲ့ပာတနာကတော့ ဘာဒီလို့ခော်တဲ့ စကားမပြောတဲ့ကြွက်ကလေးပာ... ဆာလီတို့ဟာ အုက္ကတန်မြို့ရဲ့ လေဘာတီပန်းခြံထဲမှာ နေကြပာတယ်.. တခြားတိရစ္ဆာန်လေးတွေလည်း နေထိုင်ကြပြီး ဆာလီတို့ကတော့ သီးသန့်ခွဲနေကြတာပာ... ပန်းခြံထဲက တိရစ္ဆာန်တွေကိုတော့ ရက်ကွန်လို့ခော်တဲ့ တောကြောင်ကြီးတစ်ကောင်က အုပ်ချုပ်ပာတယ်...သူကတော့ ခောင်းပုံဖြတ် အကျင့်မကောင်းတဲ့ ဗီလိန်တစ်ယောက်ပာ... ရက်ကွန်ဟာ ဆာလီကို မျက်မုန်းကျိုးနေသူလည်းဖြစ်ပာတယ်... တစ်နေ့မှာ ဆာလီတို့ဟာ ပန်းခြံရှေ့မှာ လာရောင်းတဲ့ မြေပဲလှည်းက မြေပဲတွေကို ခိုးယူဖို့ကြိုးစားပာတော့တယ်...ဒီနေရာမှာ အန်ဒီ ဆိုတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ ရှဥ့်မလေး ပာဝင်လာပာပြီ...အန်ဒီကတော့ အများအကျိုးကို ကြည့်သူဖြစ်ပြီး ဆာလီနဲ့ကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပာ... အန်ဒီရဲ့ တွဲဖက်ကတော့ ဂရေဆင်လို့ခော်တဲ့ ခပ်ပောပောရှဥ့်တစ်ကောင်ပာ...သူ့ကို ပန်းခြံရဲ့သူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးထားပာတယ်...ဒီလိုနဲ့ ဆာလီတို့ဟာ မြေပဲတွေကို ခိုးယူဖို့ကြိုးစားရင်း အန်ဒီတို့နဲ့တွေ့ပြီး မြေပဲလှည်းဟာ မတော်တဆဖြစ်ပြီး ပန်းခြံထဲက အကြီးဆုံးသစ်ပင်ကြီးကို မီးလောင်စေခဲ့ပာတယ်...အဲ့ဒီ သစ်ပင်ကြီးဟာ ပန်းခြံထဲက တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ ဆောင်းတွင်းကာလအတွက် အစာစုဆောင်းရာအပင်ကြီးဖြစ်နေပာတယ်.. ဒီတော့ အကုန်လုံး စိတ်ဆိုးကြပြီး ဆာလီ ကို ...
How to Train Your Dragon2(2014) How to Train Your Dragon2(2014) IMDb - 7.8/10_____Rotten - 91% နဂါးတှနေဲ့ ပွလေညျမှုရသှားပွီး နဂါးတှရေဲ့ လုပျအားနဲ့ ပွနျလညျတိုးတကျလာခဲ့တဲ့ Berk ရှာလေးဟာ နဂါးပွိုငျပှဲ ကငျြးပနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Hiccup ကတော့ သူရဲ့ နဂါးလေး Toothless နဲ့အတူ နယျမွသေဈ ရှာဖှမှေုတှေ ပွုလုပျရငျး အေးအေးလူလူပဲ နထေိုငျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အရှယျလှနျလာပွီဖွဈတဲ့ Stoick ကတော့ သူ့သား Hiccup ကို ရှာသူကွီးလုပျဖို့ ဖိအားပေးစ ပွုနပေါပွီ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု မရှိသေးတဲ့ Hiccup အတှကျတော့ ဒီကိစ်စဟာ အကွီးမားဆုံး စိနျချေါမှုတဈခုပါပဲ။အပွောကယျြတဲ့ မွကေမ်ဘာမှာ လြှောကျသှားရငျး Hiccup နဲ့ Astrid တို့ဟာ အလှနျကွီးမားတဲ့ အစိမျးရောငျ ရခေဲတုံးကွီး တဈခုကို တှပေ့ါတယျ။ ...
Bolt (2008) ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ကာတွန်းချစ်သူတွေကို အတော်စွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ်က သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ Bolt ဆိုတဲ့ ခွေးလေးတစ်ကောင်အကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာပါ။ဇာတ်လမ်းအရဆိုရင် အဲ့ဒီခွေးလေးဟာ သိပ္ပံဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုမှာ သူ့ရဲ့သခင်မဖြစ်သူ Penny ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပြီး Bolt ဟာ သရုပ်ဆောင်နေရတာကို အမှန်တကယ်ထင်မှတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ Bolt တစ်ကောင် မတော်တဆဖြစ်ပြီး ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မြို့တော်ရဲ့ အပြင်ကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း စွမ်းအားရှင်ခွေးတစ်ကောင်လို့ထင်နေတဲ့ Bolt ကတော့ အလွဲလွဲအမှားမှားတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်။ အပြင်လောကကိုရောက်သွားတဲ့ Bolt ဟာ သူ့ရဲ့သခင်မဆီကို ပြန်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ ဘာတွေကြုံတွေ့ရမယ် ဘာတွေ သိလာရမယ်ဆိုတာတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ခံစားကြည့်ရှုကြပါဦး။ (ဇာတ်လမ်းအရသာပေါ့မှာစိုးတဲ့အတွက် ဒီလောက်ပဲညွှန်းပါရစေ )IMDb rating 6.9/10 ထိ ရရှိထားပြီး Bolt အဖြစ် John Travolta ၊ Penny အဖြစ် Miley Cyrus တို့က အသံ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာဆိုရင်ဖြင့် ပရိတ်သက်ကြီးအကြိုက်တွေ့စေမယ့်ကာတွန်းဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ အားပေးကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးလို့File ...
Jumper (2008) မကျြစိနဲ့မွငျဖူးတဲ့ ဘယျနရောကိုမဆို တမုဟုတျခငျြးသှားနိုငျတဲ့ Jumper လိုစှမျးအားရှိတဲ့ လူသားက ဒီဇာတျကားကို ဦးဆောငျပါတယျ။ စှမျးအားရှငျလူစှမျးကောငျးဖကျကို ဦးတညျရငျပိုကောငျးမယျ့ဇာတျအိမျမြိုးဖွဈပမေယျ့ ဒါရိုကျတာကတော့ သမားရိုးကပြဲ ဇာတျလမျးကိုတညျဆောကျလိုကျပါတယျ။ ခံစားကွညျ့ပါဦး။ IMDb Rating(6.1/10) ရရှိထားတဲ့ Action, Adventure, Sci-Fi အမြိုးအစားဇာတျကားပါ။ ----------------------------------------------- မျက်စိနဲ့မြင်ဖူးတဲ့ ဘယ်နေရာကိုမဆို တမုဟုတ်ချင်းသွားနိုင်တဲ့ Jumper လိုစွမ်းအားရှိတဲ့ လူသားက ဒီဇာတ်ကားကို ဦးဆောင်ပါတယ်။ စွမ်းအားရှင်လူစွမ်းကောင်းဖက်ကို ဦးတည်ရင်ပိုကောင်းမယ့်ဇာတ်အိမ်မျိုးဖြစ်ပေမယ့် ဒါရိုက်တာကတော့ သမားရိုးကျပဲ ဇာတ်လမ်းကိုတည်ဆောက်လိုက်ပါတယ်။ ခံစားကြည့်ပါဦး။ IMDb Rating(6.1/10) ရရှိထားတဲ့ Action, Adventure, Sci-Fi အမျိုးအစားဇာတ်ကားပါ။File size...(803 MB) Quality...BR-Rip 720p Format...mp4 Duration....01:28:29 Subtitle....Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder....Nyeinsaeya Aung
The Sorcerer’s Apprentice (2010) The Sorcerer's Apprentice (2010) IMDb - 6.1/10_____Rotten - 40% မငျးသားကွီး နီကိုလပျကေ့ နဲ့ Jay Baruchel တို့ပါဝငျထားတဲ့ မှျောဇာတျကားပါ။နိုးထလာတော့မယျ့ မကောငျးဆိုးဝါးကို နှိမျနငျးဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ မှျောဆရာ... မှျောလကျစှပျကို မထငျမှတျပဲ ဝတျလိုကျမိတဲ့ ကြောငျးသားလေး.... သူတို့တှဘေယျလိုတှဆေုံ့ပွီး ကမ်ဘာကွီးရဲ့ ရနျသူကို ဘယျလိုနှိမျနငျးမလဲဆိုတာ........။ Action, Adventure, Fantasy အမြိုးအစားဇာတျကားဖွဈပွီး IMDb Rating (6.1/10) ရရှိထားပါတယျ။ (မွနျမာစာတနျးထိုးကိုတော့ Ynwa August မှတငျဆကျလိုကျတာပါ။) မင်းသားကြီး နီကိုလပ်ကေ့ နဲ့ Jay Baruchel တို့ပါဝင်ထားတဲ့ မှော်ဇာတ်ကားပါ။ နိုးထလာတော့မယ့် မကောင်းဆိုးဝါးကို နှိမ်နင်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မှော်ဆရာ... မှော်လက်စွပ်ကို မထင်မှတ်ပဲ ဝတ်လိုက်မိတဲ့ ကျောင်းသားလေး.... သူတို့တွေဘယ်လိုတွေ့ဆုံပြီး ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ရန်သူကို ဘယ်လိုနှိမ်နင်းမလဲဆိုတာ........။ Action, Adventure, Fantasy အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး IMDb Rating (6.1/10) ရရှိထားပါတယ်။ (မြန်မာစာတန်းထိုးကိုတော့ Ynwa August မှတင်ဆက်လိုက်တာပါ။) File ...
The Golden Compass (2007) The Golden Compass (2007) IMDb - 6.1/10_____Rotten - 42% Won 1 Oscar. Another6wins & 32 nominations ဝိဉာဉျတှကေ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ နကွေတယျ... ငါတို့ ကမ်ဘာမှာတော့... ငါတို့ဝိဉာဉျတှကေ ငါတို့ဘေးမှာလမျးလြှောကျပွီးနကွေတယျလေ။ နိဒါနျးလေးကွညျ့လိုကျရုံနဲ့ အရမျးစိတျဝငျစားမိမှာ ပဲဆိုတာမွကွေီးလကျခတျမလှဲပါပဲ.... လိုငျရာ တဈယောကျကလေးခငျြးစကွနောကျကွရငျးနဲ့ မထငျမှတျပဲ အရေးကွီးကိစ်စတဈခုထဲရောကျသှားပါတော့တယျ သူကိုယျတိုငျကလညျးအဖိုးတနျရတနာလေးဖွဈနပေါတယျ.. လိုငျရာကတဈဦးတညျးသောအမှနျတရားကို ဖတျနိုငျသူလေးဖွဈနတောပါ.. ကဲ လိုငျရာတဈယောကျ ဘယျလိုအမှနျတရားတှရှောမယျ.. ဘယျလိုဖွရှေငျးသှားမယျဆိုတာ...အခုပဲကွညျ့လိုကျကွစို့ဗြား (ဇာတျကားအညှနျးနဲ့ ဘာသာပွနျသူကတော့ Aye Min Oo ပဲ ဖွဈပါတယျ) ဝိဉာဉ်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ နေကြတယ်... ငါတို့ ကမ္ဘာမှာတော့... ငါတို့ဝိဉာဉ်တွေက ငါတို့ဘေးမှာလမ်းလျှောက်ပြီးနေကြတယ်လေ။ နိဒါန်းလေးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားမိမှာ ပဲဆိုတာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ.... လိုင်ရာ တစ်ယောက်ကလေးချင်းစကြနောက်ကြရင်းနဲ့ မထင်မှတ်ပဲ အရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုထဲရောက်သွားပါတော့တယ် သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဖိုးတန်ရတနာလေးဖြစ်နေပါတယ်.. လိုင်ရာကတစ်ဦးတည်းသောအမှန်တရားကို ဖတ်နိုင်သူလေးဖြစ်နေတာပါ.. ကဲ လိုင်ရာတစ်ယောက် ဘယ်လိုအမှန်တရားတွေရှာမယ်.. ဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုတာ...အခုပဲကြည့်လိုက်ကြစို့ဗျား (ဇာတ်ကားအညွန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Aye Min Oo ပဲ ဖြစ်ပါတယ်) File Size : 810 MB Quality : Blu ray 720P Running Time : 1hr ...
Penguins of Madagascar (2014) Penguins Of Madagascar (2014) IMDb - 6.7/10_____Rotten - 73% ဒီ ဇာတျလမျးလေးကတော. Skipper, Kowalski, Rico နဲ. Private join ဆိုတဲ့ပငျဂှငျးလေးကောငျရဲ. စှနျစားခနျးလေးတှအေကွောငျးပါ ဇာတျလမျးအစမှာတော့ Skipper, Kowalski, Rico တို.ဟာ Private မှေးဖှာမဲ. ဥ ကိုကယျတငျခဲ့ပွီး Private ဟာ Skipper, Kowalski, Rico တို.နဲ. မိသားစုဝငျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ပငျဂှငျးလေးကောငျဟာ နယူးယောကျချ မွို.ကိုရောကျရှိခဲ့ပွီး ပငျဂှငျးတှကေို ရနျငွိုးကွီးနတေဲ့ရဘေဝဲ ဒဗျေ့က ဖမျး သှားပါတယျ။. နော.ဝငျး အဖှဲ.သားတှနေဲ.ပငျဂှငျးလေးကောငျ ပူပေါငျးပွီး ရဘေဝဲ ဒဗျေ. ရဲ. ယုတျမာမူတှကေို အတူတှနျးလှနျရာကနေ အကုနျလုံး ရဘေဝဲ ဒဗျေ.ရဲ.ဖမျးဆီးခွ ငျးကို ခံခဲ့ရပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ ပငျဂှငျး အဖှဲ.ရဲ. အငယျဆုံးကောငျလေးဖွဈတဲ့ Private ဟာ ပငျဂှငျး တှအေကုနျလုံးကို ...
Blue Streak (1999) ဒီကားက ထွက်တာလဲ တော်တော်ကြာပြီဖြစ်သလို ကျွန်တော့်ရဲ့ Hard diskထဲမှာ သိမ်းထားတာလဲ ၂ နှစ်ကျော်နေပါပြီဇာတ်ကားအကြောင်းပြောရရင်တော့သူခိုးတွေက တန်းဖိုးအရမ်းကြီးတဲ့ အပြာရောင် စိန်တုံးကိုခိုးရင်းအချင်းချင်းသစ္စာဖောက်ရာကနေ ရဲတွေ ရောက်လာခဲ့တာကြောင့် အဖမ်းခံရတော့မှာမို့ စိန်တုံးကြီးကို အဲဒီနားက အဆောက်အအုံမှာ ဖွက်ထားခဲ့လိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီဖွတ်ထားခဲ့တဲ့ သူခိုးကနေ ထောင်ကနေ လွတ်လာရော စိန်တုံးကို ပြန်ယူဖို့လုပ်တော့ အဲဒီအဆောက်အအုံက ရဲစခန်းဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။အဲဒါကနေ အဲဒီသူခိုးက ရဲအယောင်ဆောင်ပြီး စိန်တုံးကို ဘယ်လို ပြန်ယူမှာလဲ၊ ရဲဘ၀မှာရော ဘာတွေ တစ်လွဲတစ်ချော်ဖြစ်ဦးမှာလဲဆိုတာကို ဟာသဆန်ဆန် ရိုက်ထားတဲ့ကားပါ။သူခိုးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ Martin Lawrence ရဲ့ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်လဲ ဒီကားက ဟာသကားတွေထဲမှာ ဘယ်အချိန် ပြန်ကြည့်ကြည့် ဇာတ်ကားကောင်းအဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါ။မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်လိုက်ပါဦး@joker
Big Game (2014) Big Game (2014)IMDb - 5.4/10_____Rotten - 78% 2015 ခု နှဈထဲမှာ ထှကျရှိထားတဲ့ ဇာတျကား အမိုကျစား ဖွဈပါတယျ...ဒါရိုကျတာ Jalmari Helander က ရိုကျကူးတငျဆကျထားပွီး IMDb Rating 5.4 ရရှိထားပါတယျ...Rotten Tomatoes က တော့ 78% ရရှိထားတာကို တှမွေ့ငျရမှာပါ အမရေိကနျတှအေနနေဲ့လညျး သမ်မတ ကို ပဲဇာတျလမျးတညျပွီးရိုကျရတာသိပျအားရနကွေလားတော့ မသိဘူး..White House Down တို့ olympus has fallen တုနျးကလညျး အိမျဖွူတျောကို စိစိညကျ ညကျကွနေအေောငျရိုကျပွထားခဲ့ပွီးပွီ..အခုလညျး ဒီဇာတျလမျးမှာ သမ်မတ ကို လိုကျလံလုပျကွံ သတျဖွတျတဲ့ ဇာတျကွောငျးနဲ့ ရိုကျပွထားပါတယျ..အကောငျးမှနျဆုံးရိုကျပွထားခွငျးဖွဈပါတယျ. ဆယျကြျောသကျကောငျလေးတဈယောကျရဲ့ Campsite နားလေးမှာ သမ်မတ လယောဉျဟာပဈခြ ခံလိုကျရပါတယျ..အဲ့မှာ ကောငျလေးက သမ်မတကွီးကို ကယျဆယျပွီးတဲ့နောကျမှာတော့.. ထပျပွီးလိုကျလာတဲ့ လိုကျလံသတျဖွတျတဲ့သူတှလေကျက 2ယောကျလုံးလှတျအောငျပွေးရပါတော့တယျ စိတျဝငျစားမှုအရှိနျအဟုနျကောငျးကောငျးနဲ့ အကျရှငျကောငျးကောငျးကွိုကျသူတှအေတှကျတော့ ကွညျ့သငျ့တဲ့ဇာတျကားမြိုးဖွဈကွောငျးအသိပေးလိုကျပါတယျ File size : 550 MB Quality : 720p Format : ...